About Us | JKL Hologram
ကျွန်တော် များ JKL Jewel Ko Lay Co., Limited သည် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အလျှောက် “လှပသောထုပ်ပိုးမှုများဖြင့် ကမ္ဘာဈေးကွက်တွင်ရောက်စေမည်” ဟူသော စကားရပ်နှင့်အညီ နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို သေသပ်လှပစေပြီး နိုင်ငံတကာတွင် ဈေးကောင်းရရှိစေရန်အတွက် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကို ပံ့ပိုးပေးနေသော “Packages Supporting Industry” ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ JKL Co,. Ltd ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ပြီး ယနေ့ထိတိုင်နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီထုပ်ပိုးကုန်များကို တောင်ဒဂုံစက်မှူဇုန် (၂) ရန်ကုန်မြို့မှာ စက်ရုံတည်ဆောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းပေါင်း ၆၅ ဦး ခန့်ဖြင့် USD 700,000 ခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်များအလိုက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း ၊ (UV Lamination) ပြုလုပ်ခြင်း ၊ Stamping Embossing , Die Cutting များကို ခေတ်မှီ Auto စက်များ တင်သွင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး Batching, Labeling , Folding , gluing များအထိ မြန်မာ့ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသောကြောင့် (၂၀၁၅)တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ နိုင်ငံစွမ်းဆောင်ရည်ဆုကို ပေးအပ်ချီးမြင့်ခြင်းခံရသော လုပ်ငန်းအဖြစ် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ထုတ်ကုန်များ ဆောင်ရွက်စေနိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာများနှင့် စက်မှုထွန်းကားပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် ရှေ့ရောက်ရှိနေသော ဂျပန်နိင်ငံနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ Japan/Asia နိုင်ငံများနှင့် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အကျိူးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ နိုင်ငံထုတ်ကုန်များလည်း အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ဝင်ဆံ့နိုင်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သည် စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အလျောက် လယ်ယာထွက်ကုန် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီးဝလံများ ခေတ်မှီလိုအပ်ချက်အရ အဆင့်မြှင့်တင် ရောင်းချနိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အဆင့်မြင့်ထုတ်ပိုးမှုပုံစံဖြင့် ကုန်ချောကုန်ခြောက်များ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့၏ Jewel Ko Lay Co., Ltd. (JKL Packaging) Packages Supporting Industry မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး ထိုမှတဆင့် JKL Nutrition Food Production အခန်းကဏ္ဍအထိ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
We are Jewel kolay company limited. This isapackage that supports the products and services of our customers in the international market in accordance with the term “Package Support”.
We have established our company since 1997 and today we have established International Standard Packages supporting Company in South Dagon Industrial Zone (2) in Yangon withatotal investment of 40,000 US$ with 65 employees.
Now drafting processes , Computer Designs, printing, UV coating, Laminating, Hotstamp, Embossing , Diecutting have imported modern machines , Folding Glueing , Batching Labeling machines used to market needs and supported.
And we got President national performance award (2015), which is obtained picked peck asabusiness today .
As our country is an agricultural nation, we need to expand JKL nutritional food industry through JKL nutrition and food industry to improve the export of agricultural produce and increase farmers’ incomes.
So We would like to work in partnership with development of industrialized. Internationally-owned with advanced technology to enable international standard products. We also believe that by cooperating with Japan and Asia.
私たちはジュエル・コレイ社です。 これは、「パッケージサポート」という用語に 従って、国際市場のお客様の製品とサービスをサポートするパッケージング会社です。
現在,製図プロセス、コンピューター設計、印刷、UVコーティング、ラミネート加工、 ホットスタンプ、エンボス加工、ダイカットは、最新の機械、折り畳み接着剤、バッチ 処理ラベリングマシンを市場のニーズに合わせてサポートしています。 そして、私たち は小型ビジネスとして選ばれた大統領国家業績賞（2015）を獲得しました。
そのため、国際標準製品を実現するための先進技術を備えた、工業化され国際的 に所有されている日本の開発と協力したいと考えています。 また、日本およびアジア人 と協力することで、我々の会社と国を成長させることができると考えながら合弁を願ん でいます。
Jewel Ko Lay Co., Ltd
JKL Commercial Labels & Packages Supporting Industry
No.21, 14 Street (Lower Block), Lanmadaw Township, Yangon.
01 – 229219, 09 – 264478876, 09 – 73029447, 09 – 73009234
Jewel Ko Lay Co., Ltd.
အမှတ် ၂၁ ၊ ၁၄ လမ်း (အောက်) ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
၀၁ – ၂၂၉၂၁၉ ၊ ၀၉ – ၂၆၄၄၇၈၈၇၆, ၀၉ – ၇၃၀၂၉၄၄၇ ၊ ၀၉ – ၇၃၀၀၉၂၃၄
© Jewel Ko Lay Co., Ltd. Designed by Ethical Digit.